Saddex ruux oo lagu dilay iskuul ku yaalla Maraykanka - BBC News Somali
11 Abriil 2017
Ardayda ayaa laga daad gureeyay fasallada
Booliska dalka Mareykanka ayaa sheegay in labo dhallinyaro ah iyo hal canug ay ku dhinteen weerar ka dhacay fasal ka mid ah dugsi hoose oo ku yaalla magaalada Bernardino ee dalka Maraykanka.
Ninka looga shakiyay in uu weerarka geystay ayaa toogasho ku dilay xaaskiisii hore iyo macallin, wuxuuna sidoo kale dhaawacay laba caruur ah oo mid kamid ah uu u dhintay dhaawicii soo gaaray, iyadoo markii dambe ninkaasi uu is idilay.
Madaxa booliska ee deegaankaas Jarrod Burguan ayaa dhacdadani ku tilmaamay in ay tahay mid ay uga shakiyeen "isku day is dilid".
Masuuliiyiintu waxay intaa ku dareen in ninka weerarka soo qaaday oo 53 jir ah, laguna magacaabo Cedric Anderson uu gudaha u galay iskoolkaasi isagoo iska dhigaya qof marti ah, waxaana uu hoosta gashaday hubkii uu watay inta uusan weerarku ku qaadin 15 caruur ah oo halkaasi wax lagu barayay kuwaa oo ah carruur u baahan xannaanayn gaar ah.
Xigashada Sawirka, San Bernadino Police
Anderson oo midig xiga ayaa dilay xaaskiisa Smith oo aysan isla noolayn oo bidix ka muuqata iyo wiil siddeed jir ah
Wargeyska The Los Angeles ayaa ku soo warramaya in ninka weeraraka fuliyaya uu halkaasi ku dilay xaskiisa Elaine Smith iyo wiil 8 sano jir ah oo lagu magacaabay Jonathan Martinez oo markii dambe cisbitaalka ku geeroyooday.
Ilaa iyo lix boqol oo arday ah ayaa lagu daad gureeyay bas , kuwaas oo la geeyay dugsiga sare ee Cajon High School oo halkaasi ka ag dhawaa, halkaa oo ay markii dambe kula kulmeen waalidkii dhalay caruurtaasi.
Qaarabadda oo u yimid in ay carruurtooda kaxaystaan
Japan oo ka tacsiyeeyay 2,400 Maraykan ah oo uu horay u dilay
Gabadh Soomaali ah oo asturan oo Tartan qurux Minnesota kaga qaybgashay
Ilaa iyoo bishii Desembar ee sannadkii 2015kii waxaa magaaladaasi San Bernardino lagu dilay 14 qof, halka 21 kalena lagu dhaawacay ka dib markii nin iyo xaskiisa ay weerareen xarun caafimaad.
TOOS Diyaaradii uu la socday Fahad Yaasiin oo Turkiga dib loogu celinayo
Faransiiska oo sheegay in Mareykanka iyo UK ay dhabarka ka toogteen
Seddaxda su'aalood ee aan jawaabta loo helin ee ku saabsan kiiska Ikraan
Sidee ayuu ku biloowday xiriirka Grand P iyo Eudoxie Yao
1 Sebtembar 2021
Guur ayaanba haweystay: Sida ay BBC-da u badashay nolosheydii cariiriga ahayd
2 Sebtembar 2021
Jilaa caan ah oo lagu heysto hadal uu Muslimiinta ka sheegay
4 Sebtembar 2021
Min Muqdisho illaa Kabul, muxuu Maraykanka ugu jabaa dagaal kasta?
31 Agoosto 2021
Wasiir iyo Sheekh isaga jawaabay munaasabad Coldoon lagu soo hadal qaaday
'Kumannaan haween ayaan ka badbaadiyay guur la mid ahaa midkeyga'
29 Agoosto 2021
Sida warbaahinta caalamka uga warrantay khilaafka Farmaajo iyo Rooble